इतिहासमा आजः शेन वार्नको ‘बल अफ द सेञ्चुरी’ – Talking Sports
बिश्व क्रिकेटमा शेन वार्नको प्रवेश भएको एक बर्षमात्र भएको थियो । सन् १९९३ मा इङ्गल्याण्डबिरुद्धको ६ टेस्टको एसेज श्रंखलाका लागि अष्ट्रेलियालाई निकै बलियो आकिएको थियो ।
ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको पहिलो टेस्टको पहिलो दिन अष्ट्रेलियाले पहिलो इनिङ्गसमा मार्क टेलरको शतकको मद्दतमा २ सय ८९ रन बनायो । दोश्रो दिन, अर्थात जुन ४ मा, कप्तान एलन बोर्डरले २३ बर्षिय वार्नलाई बल थमाए । क्रिजमा थिए निकै अनुभवी ब्याट्स्म्यान माइक ग्याटिङ्ग ।
बर्षातका कारण ओसिलो रहेको पिचमा कतै–कतै मसिनो धाजा फाटेको थियो । वार्न इङ्गलिस भुमिमा आफ्नो पहिलो बलका लागि तयार भए । ओभर दि विकेट बलिङ्ग गर्दै लेग स्टम्पको धेरै बाहिर ड्रप गराएको उनको बलले दिशा बदल्दै ग्याटिङ्गको अफ स्टम्पको टुप्पोमा लाग्यो । ग्याटिङ्ग स्तब्ध भए, त्यो बललाई बुझ्नु अघि नै उनी बोल्ड भइसकेका थिए ।
पछि त्यो बललाई २० औं शताब्दीकै बल अफ द सेञ्चुरी नाम दियो । वार्नको बल अफ द सेन्चुरी क्रिकेट समर्थकहरुको दिमागमा निकै लामो समयसम्म रहन पुग्यो । सामान्य बलरदेखि वार्नले त्यही दिन लेग स्पिन लिजेण्डको रुपमा पहिलो पाइला चालेका थिए । वार्न उक्त खेलमा दुवै इनिङ्गसमा ४–४ विकेट लिदै म्यान अफ द म्याच पनि घोषित भए ।
अष्ट्रेलियाले पहिलो टेस्ट १ सय ७९ रनले मात्र जितेन, इङ्गल्याण्डलाई उसकै भुमिमा भएको श्रृंखलामा ५–१ ले पनि हराएको थियो । श्रंखलामा वार्नले सर्वाधिक ३४ विकेट पनि लिएका थिए ।
बोल्ड भएपछि रनभुल्लमा परेका ग्याटिङ्ग
बल अफ द सेञ्चुरीबारे के भन्छन् ग्याटिङ्ग ?
त्यो बल पछि हेर्दा मलाई सामान्य बल जस्तो लागेको थियो । शायद मैले स्विप गरेर खेलेको भए आउट हुने थिइन । तर त्यो साच्चिकै उत्कृष्ट बल थियो । त्यो क्षण खेलको प्रमुख हाइलाइट मध्ये एक मात्र नभएर इतिहासकै एक अध्याय थियो । त्यो इतिहास क्रिकेटका उत्कृष्ट बलर शेन वार्नको नाममा रहन गयो ।
त्यो बलपछि वार्नले के भने ?
म त्यो समय २३ बर्षको थिए । हामी बसेको लण्डनको वेस्टबरी होटलबाट केही पर मात्र रहेको विन्डमिल पबमा म र मर्भ (ह्युजेज) गएका थियौं । जब हामी बाहिर निक्लियौं त्यहा २५ देखि ३० जना फोटोग्राफरहरुले हाम्रो तस्विर लिइरहेका थिए । भोलिपल्ट शेन वार्न पबमा थिए भनेर समाचार आयो । मैले के लगाइरहेको थिए भनेर आलोचना पनि भयो । शेन वार्नबारे १० कुरा जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ भनेर पनि लेखियो । कति त यस्ता थिए जसको बारेमा म आफैलाई पनि थाहा थिएन ।
रुबेन डायसमा १ सय मिलियन खर्चन तयार थियो सिटी
लिभरपुलबिरुद्धको इंगलिस प्रिमियर लिग म्याचको पहिलो हाफमा म्यानचेस्टर युनाइटेड लज्जास्पद हारतर्फ अग्रसर भएको छ ।
मोहम्मद सलाहको उच्च फर्म कायमै रहँदा युनाइटेड ओल्ड ट्राफोर्डमा पहिलो हाफमै ४–० ले पछि परेको छ । लिभरपुलका लागि फर्मममा रहेका इजिप्सियन स्ट्राइकर सलाहले दुई गोल गर्दै एक असिस्ट पनि दिएका छन् ।
सलाहले किटाको पासमा ३८ औं मिनेटमा लिभरपुलका लागि तेश्रो गोल गरे । उनले इन्जुरी समयको पाचौं मिनेटमा डियो जोटाको पासमा आफ्नो दोश्रो गोल गरे ।
सलाहले आफ्नो लगातार १० औं खेलमा गोल गरेका हुन् । उनले पछिल्लो दुई खेलमा चार गोल गसिकेका छन् ।
T20 World Cup 202159 mins ago
T20 World Cup 202114 hours ago